သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): အမှိုက်ပစ်ခြင်း အတတ်ပညာ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:52
ဘူးသူကြီးရေ-ဒဏ်ငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ တစ်ထောင်ချက်ခြင်းရိုက်မှာတဲ့ 
Thursday, 1 May 2014 at 20:41:00 BST
သူကြီးမင်းကလည်း အမှိုက်ပစ်ချင်စရာကောင်းအောင် အမှိုက်ပုံးကြီး ဖွင့်ပြထားတယ် ထင်ပါရဲ့...ဟဲ ဟဲ...
ကျွန်တော်တော့ အမှိုက်အပစ်မခံရ အမှိုက်မဖွ မခံရအောင် ဘယ်သူမှ အိမ်အလည်မလာအောင် ကြပ်ထားလိုက်တာ နားကိုအေးလို့ဗျာ...ဘယ့်နှာ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ် ခေါင်းကိုက်ရတာတောင် အချိန်အားမရတဲ့ကြားမှာ သူများအပူတွေပါ အရည်မရ အဖတ်မရ ခေါင်းပေါ်ထပ်တင်ထားရရင် အချိန်မတိုင်ခင် အစိမ်းကြွေ ကြွေရချေရဲ့...
တန်တော့ သူကြီးမင်းကို ကိုယ်ပိုင်အပူမရှိသေးတဲ့ လူပြိုကြီးပဲလို့ အမှတ်ပြည့်ပေးပြီး သူရို့မှာရှိတဲ့ အမှိုက်တွေ လာပုံပေးကြတာထင်ပါရဲ့လေ...ဟဲ ဟဲ
Thursday, 1 May 2014 at 21:55:00 BST
ဟိုက်... ကံဆိုးခြင်တော့ ဒီကနေ့ညမှာ ဘလော့ဘက်ကို ခြေပြန်ချပါတယ် စေတနာဒလဟောနဲ့ အမှိုက်ဝေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်နဲ့တိုးနေပါပကော... :P
တစ်လကို ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပဲ တင်တော့မလို့လား တဂျီးမင်း ?
တီတင့်လဲ ခေါင်းပြန်စိုက်ဘို့ အားယူနေတယ် ... :D
Saturday,3May 2014 at 16:38:00 BST
Monday,5May 2014 at 04:45:00 BST
Monday,5May 2014 at 20:33:00 BST
ပါးစပ်က တစ်ခု နားက နှစ်ဘက်တောင်ပါတာလေ. နည်းနည်းပြောပြီး များများနားထောင်ရတာ. သက်သာတာပေါ့နော် သဂျီးး))
Thursday, 8 May 2014 at 11:27:00 BST
တီလေးက အပေါင်းအသင်းနည်းတော့ အမှိုက်သိပ်ပစ်မခံရဘူး ဂျစ်တူး ပြေသလို ရတနာသိုက်ကတော့ ရရှိလိုက်ပါတယ်
Saturday, 10 May 2014 at 09:41:00 BST
Sunday, 18 May 2014 at 10:21:00 BST
တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်အမှိုက်လေး သူများကို ပေးလိုက်မှ နေသာထိုင်သာရှိတာကိုး
Tuesday,3June 2014 at 17:56:00 BST